Iska hor imaad salka ku hayo Dad lagu xiray Gobolka Mudug oo…
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug waxaa ka socda iska hor imaad u dhaxeeya Maleeshiyo ku heyb ah Rag ay xireen Ciidanka Danab, kadib howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen Koofurta Magaaladaas.
Ilo wareedyo ku sugan Magaalada Gaalkacyo ayaa Axadle u xaqiijiyay in shaqaaqada ay ka bilaabatay meel u dhaw Xarun Ciidanka Danab, waxaana qaar kamid ah Xaafadaha Magaalada laga maqlayaa rasaasta labada dhinac ay isku ridayaan.
Maleeshiyaadka hubeysan ee dagaalka kula jira Ciidanka Danab waxa ay ka caroodeen shaqsiyaad uu kamid ah yahay Nin la sheegay in uu yahay Ganacsade oo ay kala soo baxeen Guryahooda.
Lama hayo khasaaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka, maadaama dadka ka dhaw halka lagu dagaalamayo ay isaga baxeen deegaannadooda si aysan waxyeelo u gaarsiin rasaasta labada dhinac.
Ciidanka Danab ayaa kordhiyay howlgalada baaritaanada ah ee Gobolka Mudug, waxaana xiliyada habeenkii ay guryahooda kala soo baxaan shaqsiyaadka qaarkood, kolka dambe waa ay sii daayaan.
Saraakiisha Ciidamada soo bandhigaan natiijada kasoo baxda baarista ay ku sameeyaan shaqsiyaadka ay ku bartilmaameedsadaan howlgaladooda Gobolka Mudug, inta badan waxaa ka dhasha weeraro falcelin ah oo ay sameeyaan maleeshiyaad hubeysn oo ku beel ah qofka la xiro.
La soco wixii kasoo kordhaya
axadle 2009 posts